G510-0010,Y300,C8813 Easy Root Tool Kit : Myanmar Mobile Software Developer
March 14, 2013 | 21 Replies
ဒီ Tool လေးကတော့ G510,Y300,C8813 တို့ကို ၃မိနစ်အတွင်း Root လုပ်နိုင်မှာပါ…
လိုအပ်ချက်ကတော့ Bootloader Unlock အနေအထားမှာဖြစ်နေရပါမယ်…..
USB Debugging နဲ့ Unknown Sources ကိုအမှန်ခြစ်ထားရပါမယ်…….
ဒီ Tool ရဲ့အားသာချက်ကတော့ မိမိဖုန်းဟာ တစ်ခါထဲ Root Access ရသွားမယ်….
Frozen KeyBoard ကို System App တစ်ခုလိုအသုံးပြုရပါမယ်…
adf.ly ဆိုသောဆိုဒ်တက်လာလျှင် skip ad ကိုနှိပ်ပီးဒေါင်းပါ..။
ပြန်တက်ပြီး Volume Down + Power ကိုဖိနှိပ်ထားပါ….
ပြီးသွားရင်တော့ Unlock မလုပ်ကသေးတဲ့သူက Unlock ကိုနှိပ်ပြီး Code ၁၆လုံးရိုက်လိုက်ပါ….
Unlock လုပ်ပြီးသားလူကတော့ Ready To Root ကိုနှိပ်ပြီး
ဖုန်းဟာ Recovery Mode ကိုပြန်တက်သွားလိမ့်မယ်…..
Post By ဖြိုးချမ်း(Admin At MMSD) (620 Posts)စွန်လွတ်သူဆိုတာ သူ့ကို ဘယ်သူကမှ မကြည့်ချင်နေပါစေ
ပီတိနဲ့ကျေနပ်နေတာမျိုးပါConnectဖြိုးချမ်း(Admin At MMSD)စွန်လွတ်သူဆိုတာ သူ့ကို ဘယ်သူကမှ မကြည့်ချင်နေပါစေ
ပီတိနဲ့ကျေနပ်နေတာမျိုးပါMore Posts Follow Me:
လွင်မိုး says: March 14, 2013 at 1:07 pm ကိုဖြိုး ပင်ပန်းသွားပြီး… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply yoieyoie says: March 14, 2013 at 4:19 pm ကောင်းပါတယ်ဗျာနောက်ကိုအဲ့လိုထုပ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားပီဗျာ ဘာကိုမှရှာစရာမလိုတော့ဘူးလေ ကျေးဇူးပါနော်
Reply NAY LIN says: March 15, 2013 at 4:13 am THANKS
Reply ရဲလင်းကို says: March 15, 2013 at 1:55 pm ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အကို…………………
Reply asturf3nix says: March 18, 2013 at 6:55 am we may put it into English as?
Reply Htun Htun Win says: March 18, 2013 at 10:53 am ကိုဖြိုးချမ်းရေ…ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်..။
Reply မျိုးမင်းဟန် says: March 18, 2013 at 12:21 pm thz par bro….. Phyo Chan………very thz
Reply Jens says: March 23, 2013 at 4:02 pm Can any one writeaenglish translation for the above instructions.
Reply Zarni says: March 25, 2013 at 5:23 pm ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သိချင်တာလေးမေးချင်ပါတယ် unlock နှိပ်ပြိး code 16 လုံးဆိုတာ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ number ကို ရိုက်လို့ ရရဲ့ လားလို့ သိချင်လို့ ပါ။
Reply ဖြိုးချမ်း(Admin At MMSD) says: March 26, 2013 at 3:13 am မရပါဘူးးးးး
Reply C Thu says: April 26, 2013 at 1:04 pm အကို recovery လဲမတတ်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိဘူး Firmware ပြုတ်သွားတတ်လား huawei logo လေးပဲတတ်ပြီး ဘာမှမလာတော့ဘူး။
Reply ko phyo says: March 26, 2013 at 1:17 pm ကိုဖြိုးချမ်းကြီးရေ အရမ်းအရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ… နောက်လဲဒီလိုမျိုးလေးတွေများများလုပ်နိုင်ပါစေဗျာ… အစစအရာရာအဆင်ပြေပါစေဗျာ..
Reply kyawgyi says: April 4, 2013 at 8:40 pm thz
Reply zaw win latt says: April 8, 2013 at 3:19 pm ကျေးဇူးရှင်ဆရာတယောက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်
Reply ZYA says: April 13, 2013 at 6:47 am ကုဒ် ၁၆ လုံးက ဘာတွေ၇ိုက်၇တာလဲ မသိဘူး ….
Reply zwe says: May 18, 2013 at 9:17 pm G 510 ရဲ့ code ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲဗျ….
Reply Naing Htu says: May 22, 2013 at 1:04 am ကိုဖြိုးချမ်း ခင်ဗျ
ကျွန်တော် y300 အတွက် codeလဲတောင်းထား ပြီး ပါပြီး unlock လုပ်တော့ ရပ်နေတာ နဲ့ enterနောက်တကြိမ် ခေါက် လိုက် ပါတယ် finish လို့ ပေါ်ပြီး ပျောက်သွားပါတယ် Unlock ရ ပါပြီး လား ခင်ဗျ နောက်အဆင့် တွေ အကုန် ပြီး သွားတဲ့ ထိ superuser ပေါ် မလာ လို့ ပါ ကူညီပါအုန်း
Reply nyi says: July 10, 2013 at 10:52 pm s3 မှာ restart ခဏခဏကျနေလို့
Reply Ko Wunna says: September 7, 2013 at 1:47 am ကျွန်တော့်Y210c လေး ကဒ်ဖတ်ပြီး service မထွက်တော့လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကူညီပါဗျာ
Reply Hein Latt says: December 6, 2013 at 2:08 pm အကိုရေ . . ကျွန်တော့်စက်က Y300-000V0V100R001C17B171 ပါ . . အခုအကိုပေးထားတာနှင့် root လုပ်လို့ရပါသလား . . ခင်ဗျား . .. နောက်ပြီး . . Unlock မလုပ်ကသေးတဲ့သူက Unlock ကိုနှိပ်ပြီး Code ၁၆လုံးရိုက်လိုက်ပါဆိုတော့ . . Unlock ဖြစ်မဖြစ် ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲခင်ဗျာ . . တကယ်လို့ . . မဖြစ်ခဲ့ရင် . . ဘယ်လို unlock လုပ်ရမလဲ . .ဆိုတာရယ် . . unlock code ကို ဘယ်မှာထဲရမှာလဲ . . unlock code (၁၆) လုံးက ဘယ်ကနေ ကြည့်ထည့်ရမလဲ ဆိုတာလေးတွေကို . . အချိန်ရခဲ့ရင် . . ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်. . .
ဟိန်းလတ် ([email protected])
Reply phoechit says: December 27, 2013 at 8:16 pm sch-i739 for root tar lal pyaw pay bar brother
G730-U00 Build Number နောက်ဆုံး 151 Root & Myanmar Font...
Views (870) | Comments (23)
Views (680) | Comments (1077)
Huawei ဖုန်း 12 လုံးအတွက် firmware တင်ရင် updtae failed ဖြစ်...
Views (643) | Comments (114)
Views (626) | Comments (105)
Views (31847) သိသင့်သောဗဟုသုတများ…..
Views (28706) Huawei ဖုန်း 12 လုံးအတွက် firmware တင်ရင် updtae failed ဖြစ်...
Views (27508) MM Sexy Girl (Myanmar Model များ အလှဓာတ်ပုံစုစည်းမူ)
Views (25825) C8813D,Y300C Auto Root & Zawgyi keyboard
Views (18454) Myandroid v1.4 (Myanmar Android Service Tool)
Views (17360) C8816,C8816D Unlock Bootloader,Auto Root,Auto Myanmar Font (...
Views (15605) Like Us On Facebook! Myanmar Calendar